OxfordDictionary.com မှ အသစ်ထပ်တိုးတဲ့ internet slang စကားလုံး ၁၀ လုံး - Myanmar Network
OxfordDictionary.com မှ အသစ်ထပ်တိုးတဲ့ internet slang စကားလုံး ၁၀ လုံး
Posted by Soe Soe Win on September 4, 2014 at 11:47 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ကျွန်တော်တို့ အွန်လိုင်းမှာ အသုံးများတဲ့ စာလုံးတချို့ကို oxforddictionary.com မှာ ထပ်တိုးဖြည့်စွက်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအထဲက စကားလုံး ၁၀ လုံးကို လေ့လာရအောင်။
တီဗီအစီအစဉ်တွေက ဇာတ်လမ်းတွဲပေါင်းစုံကို DVD နဲ့ သို့မဟုတ် digital streaming လုပ်ပြီး အငမ်းမရ၊ မပြတ်တမ်းကြည့်ခြင်း
ဥပမာ - People who watch television online say they regularly indulge in binge watching. (အွန်လိုင်းမှာ တီဗီကြည့်နေတဲ့သူတွေ အစီအစဉ်ပေါင်းစုံကို စွဲလမ်းစွာ ကြည့်ကြ၏။)
မိမိကြွားချင်သော အကြောင်းအရာကို အများအာရုံစိုက်ရန်အတွက် မိမိကိုယ်ကို ဟန်ဆောင်နှိမ့်ချဝေဖန်ခြင်း
ဥပမာ - Social media status updates are basically selfies, humblebrags, and rants. (ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတင်ကြတဲ့ အကြောင်းအရာ တော်တော်များများကတော့ selfie တွေ၊ မိမိကို နှိမ့်ချပြီး ကြွားဝါချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ပြီး ရန်ဖြစ်တာတွေ ပါပဲ။)
အရမ်းချစ်စရာ၊ ကြိုက်စရာ၊ အလမ်းစား
ဥပမာ - All pets are totally adorbs. (အိမ်မွေးတရိစ္ဆာန်အားလုံးက အရမ်းချစ်စရာကောင်းတယ်။)
အခု သင်ဖတ်နေတဲ့ ဟာတွေပေါ့။ နံပါတ်စဉ် သို့မဟုတ် bullet points တွေနဲ့ ရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ အင်တာနက်ပေါ်က article ဆောင်းပါး။
ဥပမာ - A recent BuzzFeed listicle called '21 Pictures that will Restore Your Faith in Humanity' has attracted more than 13 million views. (BuzzFeed ဝက်ဗ်ဆိုက်ပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ '21 Pictures that will Restore Your Faith in Humanity' ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးက ကြည့်ရှုသူ ၁၃ မီလီယံကျော်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။)
You only live once (ရှေ့ရေးတွေကို တွေးပြီး စိတ်ပူနေမဲ့အစား၊ ပစ္စုပန်ကာလကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းပါဆိုတဲ့ အမြင်ကို ဖော်ပြတာ။ ပျော်ပျော်နေ သေခဲဆိုတာကို ထောက်ခံပြောဆိုတဲ့အခါ သုံးတတ်တယ်။)
ဥပမာ - I just ordered £40 worth of Chinese food. But YOLO, right? (ဈေးကြီးတဲ့ အစားအသောက်ပေမဲ့ နှမျောမနေနဲ့ စားမှာသာ စားစမ်းပါ။)
အများက မကောင်းဝေဖန်ထားတဲ့ လှောင်ပြောင်ထားတဲ့ ရုပ်သံဇာတ်၊ ရုပ်ရှင်စသည်တို့ကိုမှ ရွေးကြည့်ခြင်း
ဥပမာ - I hate-watch every single episode. (လူတွေ ဟာသလုပ်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင် အပိုင်းတိုင်းကို ငါမလွတ်တမ်းကြည့်ဖြစ်တယ်။)
အင်တာနက် သုံးနေသူတွေကို အင်တာနက်စာမျက်နှာ webpage တစ်ခုခုကို ဝင်မကြည့်ပဲမနေနိုင်အောင် လှုံ့ဆော်ဆွဲဆောင်မှုများနှင့် တန်ဆာဆင် (ထောင်ခြောက်ဆင်) ထားတဲ့ content အကြောင်းအရာ
ဥပမာ - This is not news, really. It’s click bait. (ဒါက သတင်းမှမဟုတ်ပဲ။ လူတွေ စိတ်ဝင်စားအောင် တမင် တန်ဆာဆင်ရေးထားတာပဲ။)
၈။ Smart watch
လက်ကောက်ဝတ်မှာ ပတ်၍ရသော touch screen display ပါတဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်း
ဥပမာ - The main benefit ofasmartwatch is that it keeps you constantly updated without you having to whip out your smart phone. (စမတ်နာရီရဲ့ အဓိက အားသာချက်ကတော့ ဖုန်းခဏခဏထုတ်ကြည့်စရာမလိုဘဲ အချိန်ပြည့် အဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိစေတာပါပဲ။)
Crazy ကို ပြောတာ။ Cray ကို နှစ်ခါထပ်ပြီး 'cray cray' လို့လည်း ပြောလေ့ရှိတယ်။
ဥပမာ - She's cray cray. (သူမ ဂေါက်နေပြီ။)
ခေတ်ပေါ်နည်းပညာ၊ အထူးသဖြင့် ကွန်ပြူတာနှင့် ပတ်သက်တဲ့ အသုံးပြုပုံတွေကို အထူးတတ်ကျွမ်းနားလည်သူ
ဥပမာ - Kids are pretty tech-savvy these days. (အခုခေတ် ကလေးတွေ နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ရင် အကုန်တတ်တယ်။)
အခုဖော်ပြခဲ့တာတွေက Oxforddictionary.com မှာ ထပ်ဖြည့်လိုက်တဲ့ စကားလုံးသစ် တချို့သာဖြစ်ပါတယ်။ ပြောင်းလဲနေတဲ့ စကားအသုံးအနှုန်းတွေကိုလည်း လေ့လာဆည်းပူးတာပေါ့။ အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေဟာ အချိန်၊ နေရာဒေသကို လိုက်ပြီး တစ်ဖြေးဖြေးပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာတာကို လေ့လာနိုင်တယ်။ ခေတ်ပေါ်စကားလုံးတွေဟာ ခေတ်ကုန်သွားပြီး ပျောက်ကွယ်သွားတာတွေလဲ ရှိတယ်။
Irishexaminer.com မှ Denise O'Donoghue ၏ Ten internet slang words which were added to OxfordDictionaries.com ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Luck/ Tell/ Go/ Present/ Two)
ကြှနျတျောတို့ အှနျလိုငျးမှာ အသုံးမြားတဲ့ စာလုံးတခြို့ကို oxforddictionary.com မှာ ထပျတိုးဖွညျ့စှကျလိုကျပါတယျ။ အဲဒီအထဲက စကားလုံး ၁၀ လုံးကို လလေ့ာရအောငျ။
တီဗီအစီအစဉျတှကေ ဇာတျလမျးတှဲပေါငျးစုံကို DVD နဲ့ သို့မဟုတျ digital streaming လုပျပွီး အငမျးမရ၊ မပွတျတမျးကွညျ့ခွငျး
ဥပမာ - People who watch television online say they regularly indulge in binge watching. (အှနျလိုငျးမှာ တီဗီကွညျ့နတေဲ့သူတှေ အစီအစဉျပေါငျးစုံကို စှဲလမျးစှာ ကွညျ့ကွ၏။)
မိမိကွှားခငျြသော အကွောငျးအရာကို အမြားအာရုံစိုကျရနျအတှကျ မိမိကိုယျကို ဟနျဆောငျနှိမျ့ခဝြဖေနျခွငျး
ဥပမာ - Social media status updates are basically selfies, humblebrags, and rants. (ဆိုရှယျမီဒီယာမှာတငျကွတဲ့ အကွောငျးအရာ တျောတျောမြားမြားကတော့ selfie တှေ၊ မိမိကို နှိမျ့ခပြွီး ကွှားဝါခငျြတဲ့ အကွောငျးအရာတှနေဲ့ အခငျြးခငျြးတိုကျခိုကျပွီး ရနျဖွဈတာတှေ ပါပဲ။)
အရမျးခဈြစရာ၊ ကွိုကျစရာ၊ အလမျးစား
ဥပမာ - All pets are totally adorbs. (အိမျမှေးတရိစ်ဆာနျအားလုံးက အရမျးခဈြစရာကောငျးတယျ။)
အခု သငျဖတျနတေဲ့ ဟာတှပေေါ့။ နံပါတျစဉျ သို့မဟုတျ bullet points တှနေဲ့ ရေးသားဖျောပွထားတဲ့ အငျတာနကျပျေါက article ဆောငျးပါး။
ဥပမာ - A recent BuzzFeed listicle called '21 Pictures that will Restore Your Faith in Humanity' has attracted more than 13 million views. (BuzzFeed ဝကျဗျဆိုကျပျေါမှာ တငျထားတဲ့ '21 Pictures that will Restore Your Faith in Humanity' ဆိုတဲ့ ဆောငျးပါးက ကွညျ့ရှုသူ ၁၃ မီလီယံကြျောကို ဆှဲဆောငျနိုငျခဲ့တယျ။)
You only live once (ရှရေ့ေးတှကေို တှေးပွီး စိတျပူနမေဲ့အစား၊ ပစ်စုပနျကာလကို ပြျောရှငျစှာ ဖွတျသနျးပါဆိုတဲ့ အမွငျကို ဖျောပွတာ။ ပြျောပြျောနေ သခေဲဆိုတာကို ထောကျခံပွောဆိုတဲ့အခါ သုံးတတျတယျ။)
ဥပမာ - I just ordered £40 worth of Chinese food. But YOLO, right? (စြေးကွီးတဲ့ အစားအသောကျပမေဲ့ နှမြောမနနေဲ့ စားမှာသာ စားစမျးပါ။)
အမြားက မကောငျးဝဖေနျထားတဲ့ လှောငျပွောငျထားတဲ့ ရုပျသံဇာတျ၊ ရုပျရှငျစသညျတို့ကိုမှ ရှေးကွညျ့ခွငျး
ဥပမာ - I hate-watch every single episode. (လူတှေ ဟာသလုပျထားတဲ့ ရုပျရှငျ အပိုငျးတိုငျးကို ငါမလှတျတမျးကွညျ့ဖွဈတယျ။)
အငျတာနကျ သုံးနသေူတှကေို အငျတာနကျစာမကျြနှာ webpage တဈခုခုကို ဝငျမကွညျ့ပဲမနနေိုငျအောငျ လှုံ့ဆျောဆှဲဆောငျမှုမြားနှငျ့ တနျဆာဆငျ (ထောငျခွောကျဆငျ) ထားတဲ့ content အကွောငျးအရာ
ဥပမာ - This is not news, really. It’s click bait. (ဒါက သတငျးမှမဟုတျပဲ။ လူတှေ စိတျဝငျစားအောငျ တမငျ တနျဆာဆငျရေးထားတာပဲ။)
လကျကောကျဝတျမှာ ပတျ၍ရသော touch screen display ပါတဲ့ မိုဘိုငျးဖုနျး
ဥပမာ - The main benefit ofasmartwatch is that it keeps you constantly updated without you having to whip out your smart phone. (စမတျနာရီရဲ့ အဓိက အားသာခကျြကတော့ ဖုနျးခဏခဏထုတျကွညျ့စရာမလိုဘဲ အခြိနျပွညျ့ အဆကျအသှယျမပွတျရှိစတောပါပဲ။)
Crazy ကို ပွောတာ။ Cray ကို နှဈခါထပျပွီး 'cray cray' လို့လညျး ပွောလရှေိ့တယျ။
ဥပမာ - She's cray cray. (သူမ ဂေါကျနပွေီ။)
ခတျေပျေါနညျးပညာ၊ အထူးသဖွငျ့ ကှနျပွူတာနှငျ့ ပတျသကျတဲ့ အသုံးပွုပုံတှကေို အထူးတတျကြှမျးနားလညျသူ
ဥပမာ - Kids are pretty tech-savvy these days. (အခုခတျေ ကလေးတှေ နညျးပညာနဲ့ပတျသကျရငျ အကုနျတတျတယျ။)
အခုဖျောပွခဲ့တာတှကေ Oxforddictionary.com မှာ ထပျဖွညျ့လိုကျတဲ့ စကားလုံးသဈ တခြို့သာဖွဈပါတယျ။ ပွောငျးလဲနတေဲ့ စကားအသုံးအနှုနျးတှကေိုလညျး လလေ့ာဆညျးပူးတာပေါ့။ အင်ျဂလိပျစကားလုံးတှဟော အခြိနျ၊ နရောဒသေကို လိုကျပွီး တဈဖွေးဖွေးပွောငျးလဲဖွဈပျေါလာတာကို လလေ့ာနိုငျတယျ။ ခတျေပျေါစကားလုံးတှဟော ခတျေကုနျသှားပွီး ပြောကျကှယျသှားတာတှလေဲ ရှိတယျ။
Irishexaminer.com မှ Denise O'Donoghue ၏ Ten internet slang words which were added to OxfordDictionaries.com ကို ကိုးကားဘာသာပွနျထားတာဖွဈပါတယျ။
အသုံးဝငျသော အင်ျဂလိပျစကားအသုံးအနှုနျးမြား (Luck/ Tell/ Go/ Present/ Two)
Permalink Reply by suesuemyat on September 5, 2014 at 14:25
Permalink Reply by aungnaingthu on September 6, 2014 at 13:45
Permalink Reply by yethu on September 8, 2014 at 9:49
Pronunciation should be expressed. Thanks.
Permalink Reply by thinkhaingsoe on August 7, 2015 at 15:07